Nur - nur-Sarysu नदी बेसिन
काजाकिस्तान पानी सिस्टम - विशाल देश को सम्पूर्ण क्षेत्र मार्फत फैलिएको नदीहरूको एक विशाल नेटवर्क छ। धेरै राज्य पूल बीच यसको आकार जोड Nur-Sarysu। उहाँले पहाडमा Kyzyltas मा स्रोत। नदी पानी सिस्टम को सबै भन्दा ठूलो Nur छ। यो उनको बारेमा छ र यस लेखमा छलफल गरिनेछ।
को Nura नदी जानकारी
Nur-Sarysu बेसिन, क्षेत्र 1 लाख बारेमा faring छ जसको मा मुख गर्न स्रोत फैलिएको जो नदी, - Nura। यसलाई पश्चिमी ढलान Kyzyltas देखि बग्छ Tengiz ताल। नदी बारेमा 1,000 मी (978 मी) छ। Ulkenkundyzdy, Sherubai-Nur र Akbastau: Waterway तीन मुख्य tributaries छ।
यो कजाख Upland भित्र स्थित छ रूपमा नदी Nura, काजाकिस्तान सबैभन्दा सुखा क्षेत्रहरु मध्ये एक बुझाउँछ जहाँ क्षेत्र - सानो पहाड संग steppe क्षेत्र। अवधि वसन्त छ बाढी। स्रोत निकट र हिउँदमा गर्मी सामान्यतया ड्राई नदी - जम्छ। पनि वर्ष को उत्तेजक अवधि मा Nura को तल पानी खारा बन्नेछ। नोभेम्बर मा चिसो मौसम को शुरू संग, नदी मात्र अप्रिल को सुरुमा बिग्रनु गर्न सुरु जो बरफ, ढाकिएको छ।
Nura - कारखाना देखि रासायनिक फोहोर द्वारा प्रदूषित गरिएको नदी। त्यसैले, गत शताब्दीको दोस्रो आधा मा, कम्पनी "कार्बाइड" को पारा बारेमा 1,000 टन को एक पूल मा फ्याँकिएको। यस सन्दर्भमा, नदी केही भागहरु मा समातिए माछा, यो खान असम्भव थियो। तर, स्थिति यो पहिलो नजर मा जस्तो हुन सक्छ रूपमा रूपमा महत्वपूर्ण छ। पारा को adsorbed अवस्थामा छ, र यसैले स्थानीय जनसंख्याको जीवन र स्वास्थ्य गम्भीर खतरा छैन। Nura - धेरै छ कि एक नदी "misfortune साथीहरूलाई।" उदाहरणका लागि, दूषण एक monstrous डिग्री Minamata को जापानी शहर नजिकै समुद्र भइरहेको छ। नजिकैको बिरुवाहरु को एक गरेर पानी discharged पारा ठूलो रकम, स्थानीय बासिन्दा को स्वास्थ्य गम्भीर क्षति भएको।
सफाई Nura 2001 देखि काजाकिस्तान सरकारको एक धेरै महत्वपूर्ण निर्देशन भएको छ। यो अवधिमा नदीको पारा प्रदूषण हटाउन उपायहरूको ठूलो मात्रा जटिल गरियो समयमा यो थियो। परियोजना संयुक्त रूप विश्व बैंक संग काजाकिस्तान को अधिकारीहरु द्वारा financed छ।
वसन्त मा छ एक नदी बाढी। पानी स्तर एकदम rises रूपमा nur ओतप्रोत। नदी काजाकिस्तान मा सबै भन्दा ठूलो मध्ये एक हो, त्यसैले यो अक्सर नजिकका बस्तियों ठूलो क्षति गराउँछ पोखिन्छ। 2015 को सुरुमा नदी वेग मा पानी स्तर हुर्काउन एक रेकर्ड सेट। यो 10 सेमी प्रत्येक घण्टा वृद्धि। बाढी को विनाशकारी प्रभाव रोक्न गर्न, जलविद्युत Nura मा ताले मार्फत पानी छुट्टी उत्पादन।
यस्तो बलियो फैल लागि मुख्य कारण धारिलो मौसमी वार्मिंग, साथै वर्षा को एक ठूलो रकम छ। पर्वतमा ढलान बाट न्यानो वर्षा पानी प्रभाव अन्तर्गत नदी मा प्रवाह गर्न सुरु गर्नुहोस्।
स्थानीय अधिकारीहरूले सालाना किनभने नजिकैको सहर र गाउँमा बाढी को खतरा को सम्भव पोखिन्छ लागि तयार Nura। यस्तो क्षेत्र मा जल संसाधन मा कजाख समिति स्थानीय बासिन्दा को आपतकालीन निकासी लागि निर्माण सामाग्री, साथै विशेष उपकरण पठाउँछ।
बाढी को खतरा
अप्रिल 2015 मा सबै बाढी आयो। Nura नदी यसको बैंकहरू overflowed र, embankment मार्फत भङ्ग आसन्न क्षेत्रमा लागि बाढी सुरक्षा निर्माण गरे। स्थानीय अधिकारीहरूले द्वारा उल्लेख रूपमा, एक बार, एक बाँध, त्यसैले गम्भीर कुनै पनि खतरा सम्बन्धी क्षति। अस्थायी निकासी मात्र सीधा ब्रेकआउटको क्षेत्र मा स्थित छ, नजिकका घरहरू वसोवास विषय हुनेछ।
बाढी संग विशेष उपकरण र कामदारहरूलाई एक ठूलो संख्या समय धन्यवाद को एक अपेक्षाकृत छोटो अवधिमा सामना गर्न सक्षम थियो।
Nura - विशिष्ट प्राकृतिक सुविधाहरू नदी। ती किनभने र स्रोत मा वसन्त बाढी र गर्मी, शरद ऋतु र जाडो सुकाउने बाहिर आउन यो छ। बाढी गर्न लगभग हरेक वर्ष विषय नजिकैको सहर, तर गम्भीर क्षति छैन सामान्यतया मामला छ। बाढी मात्र गत शताब्दीको बीचमा रिपोर्ट गरिएको छ। तब देखि, त्यहाँ तिनीहरूलाई एउटा प्राविधिक सफलता थियो, अनुमति छैन नदी पानी एक विनाशकारी शक्ति बन्न सामना गर्न असमर्थ राम्रो चाँडै गर्न।
काला हंस - महान चरा
आर्कटिक उजाड को पशु, प्राकृतिक ekstremaly
पानी सुरक्षा क्षेत्र
संसारको सबैभन्दा अचम्मको बिरुवाहरु। बिरुवाहरु को अचम्मको गुण
नदी warbler गर्ने हो?
भ्रमको संग्रहालय। के हेर्न, कहाँ छ। भ्रमको कुन संग्रहालय राम्रो छ: मास्को वा सेन्ट पीटर्सबर्गमा?
बच्चाहरु को लागि ड्राई खोकी सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम
एक आवासीय घर को निर्माण को लागि भूमि कसरी प्राप्त गर्ने? एक घर निर्माण गर्न भूमि को एक षड्यन्त्र कसरी चयन गर्ने?
Mussels कसरी खाना पकाउनु?
Brunettes र Redheads बालिका लागि आँखा मेकअप।
भरी खुर्सानी: कसरी तरकारी शोरबा संग खाना पकाउनु?